i-rqlite, ukuhanjiswa okubalaseleyo kunye nobunzima be-DBMS | Ubunlog
i-rqlite, i-DBMS enobudlelwane obugqwesileyo kunye nobunzima
Ubumnyama | 24/06/2021 15:56 | Ukuhlaziywa ukuba 25/06/2021 01:38 | software
Si ujonge i-DBMS esasaziweyo esebenzisa i-SQLite njengenjini yokugcina, mandikuxelele loo nto I-rqlite yeyakho, kuba ivumela ukuququzelela umsebenzi weqela ngokusekwe kulondolozo oluhambelanayo.
Ukusuka kwiimpawu ze-rqlite, Ukulula kokufakwa, ukumiliselwa kunye nokugcinwa kugqityiwe yokugcina ehanjisiweyo ukunyamezelana kweziphoso, okufana noko kwi-etcd kunye ne-Consul, kodwa isebenzisa imodeli yedatha enxulumene endaweni yefomathi ephambili / yexabiso.
1 Malunga ne-rqlite
1.1 Malunga ne-rqlite 6.0
I-algorithm yemvumelwano yeRaft isetyenziselwa ukugcina zonke iindlela zokuvumelanisa. Rqlite Sebenzisa ilayibrari yoqobo ye-SQLite kunye nomqhubi we-go-sqlite3, ukongeza apho iqhuba khona umaleko oqhuba izicelo zabaxumi, iyaziphindaphinda kwezinye iindawo kwaye ibeke esweni imvumelwano ekufikelelwe kuyo kukhetho lwendawo ephambili.
Utshintsho kwiziko ledatha lunokwenziwa kuphela nge-node ekhethwe njengenkokeli, Kodwa unxibelelwano kunye nemisebenzi yokubhala inokujoliswa kwezinye iindawo ezikwiqela, eliya kuthi libuyise idilesi yenkokeli ukuphinda isicelo (kwinguqulelo elandelayo, bathembisa ukongeza ukuhambisa ngokuzenzekelayo umnxeba kwinkokeli).
Eyona nto kugxilwe kuyo kukunyamezelana, ke i-DBMS isikali kuphela kwimisebenzi yokufunda, kwaye imisebenzi yokubhala iyintsimbi yebhotile. Kuyenzeka ukuba usebenze iqoqo le-rqlite ukusuka kwindawo enye kwaye isisombululo esinokusetyenziselwa ukubonelela ukufikelela kwi-SQLite ngaphezulu kwe-HTTP ngaphandle kokubonelela ngonyamezelo.
Idatha ye-SQLite kwi-node nganye azigcinwanga kwifayile, kodwa kwimemori. Kwinqanaba lobeko kunye nokuphunyezwa komgaqo weRaft, irekhodi ligcinwa kuyo yonke imiyalelo ye-SQLite ekhokelela kutshintsho kwiziko ledatha.
Le rekhodi isetyenziselwa ukuphindaphinda (ukuphindaphinda kwinqanaba lokubuza umbuzo kwezinye iindawo), xa uqala i-node entsha, okanye ukubuyisela ekuphulukaneni nonxibelelwano.
Ukunciphisa ubungakanani berekhodi, ukupakisha okuzenzekelayo kuyasetyenziswa, okuqala emva kwenani elichaziweyo lotshintsho kwaye kukhokelele kungqinisiso lwefoto, apho irekhodi elitsha liqala khona (imeko yedatha kwimemori iyafana nokufota + ilog yotshintsho eqokelelweyo).
Ukusuka kwiimpawu ze-rqlite:
Uncedo lokusasazwa kweqela, ngaphandle kwesidingo sofakelo olwahlukileyo lwe-SQLite.
Amandla okufumana ngokukhawuleza ukugcinwa okuphindaphindiweyo kwe-SQL.
Ilungele ukusetyenziswa kwiiprojekthi zemveliso.
Ukufumaneka kwe-HTTP (S) API, evumela uhlaziyo lwedatha kwimowudi yebatch kunye nokumisela indawo yenkokeli yeqela. Umda wokujongana nomgca wokuyalela kunye neelayibrari zabaxhasi kwiilwimi ezahlukeneyo zenkqubo nazo zibonelelwe.
Ubukho benkonzo yokuchaza ezinye iindawo ezikuvumela ukuba wenze izihloko ngamandla.
Inkxaso yokubhala ngokutshintshiselana kwedatha phakathi kweendawo.
Isakhono sokwenza ngokwezifiso inqanaba lokujonga ukufaneleka kunye nokuhambelana kwedatha xa ufunda.
Isakhono sokukhetha ukudibanisa iindawo zokufunda kuphela ezingathathi nxaxheba kwisigqibo semvumelwano kwaye zisetyenziselwa ukwandisa ukusilela kwesihloko semisebenzi yokufunda.
Inkxaso yohlobo lwendalo lwentengiselwano esekwe ekudibaniseni imiyalelo kwisicelo esinye (imicimbi esekwe kwi-BEGIN, COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT, kunye ne-RELEASE ayixhaswanga).
Malunga ne-rqlite 6.0
Inguqulelo entsha yazisa ngotshintsho olwenziwayo olubonakalayo olujolise ekuphuculeni ukuthembeka kweqela ngokuphucula inkqubo yokwalathisa ukufunda nokubhala izicelo kwiindawo ezifanelekileyo zeqela.
Iimpawu zerqlite ngoku Unokudibanisa okuninzi okuphindaphindayo konxibelelwano phakathi kwabo kusetyenziswa uqhagamshelo lwe-TCP olusekwe phakathi kweendawo nge-Raft protocol. Ukuba isicelo sifuna igunya lenkokeli, kodwa sithunyelwe kwinqanaba lesibini, indawo yesibini inokumisela idilesi yenkokeli kwaye iyithumele kumthengi, ngaphandle kokwenza ukubalwa kwesivumelwano seRaft.
Utshintsho luye lwasusa icandelo elahlukileyo lokuvumelanisa imethadatha kunye nokususa ukuphatha ngokuhlukileyo kweRaft yenqanaba kunye nemethadatha.
Iindawo zesekondari ngoku zithumela izicelo kwindawo yokukhokela kuphela xa kufanelekile, xa kufanelekile ukufumana idilesi yendawo ekhokelayo. I-API ibonelela ngesakhono sokufumana ulwazi malunga nobume bezinye iindawo ezikwiqela. Umyalelo weSysdump wongezwa kwi-CLI.
Gqibela ukuba unomdla wokwazi okungakumbi ngayo okanye uqhagamshelane nemiyalelo yofakelo kunye nencwadana yomsebenzisi, ungayenza kwikhonkco elingezantsi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » i-rqlite, i-DBMS enobudlelwane obugqwesileyo kunye nobunzima
I-Skribisto, umhleli wombhalo ovulekileyo wababhali
Isicoci seMetadata, coca imethadatha yeefayile zakho